Ny firafitry ny seafood Supply Chains | Reef Resilience
Manomboka amin'ny mpamokatra iray (mpanjono) ny tsenan'ny fizahantany ho an'ny saham-boankazo ary mifarana amin'ny mpividy farany, izay mivarotra amin'ny mpanjifa. Ny mpividy farany dia ahitana fampindramam-bola isan-karazany (avy amin'ny tsenan'ny trondro eny an-toerana ho an'ny fametrahana varim-bazam-pirenena), trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny, toy ny hotely, hopitaly, ary sekoly. Amin'ny fanjonoana manerantany, dia tsy mahazatra loatra ny mpanjono ny manaloka tanteraka ny varotra ary mivarotra mivantana ny mpanjifa eny amoron-dranomasina na amin'ny varavarana mankany amin'ny trano. Na izany aza, noho ny fivarotana siramamy any amin'ny tsenam-barotra hafa, ny famatsiana rojo dia mety ahitana isa na marika mpilalao midina (ohatra: aggregators, processeur voalohany, mpivarotra, mpividy, mpivarotra, processeurs faharoa, mpivarotra, mpanodina) , ary hampifanaraka ny vokatra avy amin'ny famokarana hatramin'ny farany.
Fitrandrahana vaovao ao amin'ny tsenan'ny marika amoron-dranomasin'i Lima, Peru. Sary © Jeremy Rude / TNC
Amin'ny ankapobeny, ireo mpilalao midina mpilatsaka an-tsehatra amin'izao fotoana izao, ny lehibe kokoa ny fahasarotana eo amin'ny sehatry ny famatsiana, ny lehibe kokoa ny mety ho very ny data sy ny tantara, ary ny lehibe kokoa ny mety hisian'ny hosoka. Na izany aza, ny rojo famenoana fohy kokoa dia tsy voatery hitovy amin'ny angona azo itokisana kokoa. Ohatra, ao anatin'ny sehatry ny famatsiam-bola kely izay ahitan'ny mpikirakiran'ny mpanjono iray avy amin'ny mpanjono amam-borona ary avy eo mivarotra amin'ny mpivarotra roa, dia tsy azo atao ny manodina ny vokatra tsirairay amin'ny loharano raha tsy misy rafitra fanavahana sy fametahana ny vokatra avy amin'ny mpamokatra rehetra.
Ity fizarana manaraka ity dia maneho ny toetra amam-panomezana iombonana izay manakaiky ny fisian'ny asa fanjonoana, ary mifandray amin'ny vokatra vokatra vokatra sy vokatra vokatra vokatra vokatra, ireo mpilalao midina midina ao anatin'ny sehatr'asa, ary ny antony manosika fomba fanao sasany. Ny fijerena izay toetra mety ho hita eo amin'ny sehatry ny famatsiana dia afaka manampy amin'ny famolavolana paikady momba ny fomba hampiroboroboana sy hampiroboroboana ireo fomba amam-panao matihanina kokoa, ny fanangonana tahirin-tsarimihetsika sy ny fanaraha-maso, ary ny fitantarana tsara kokoa amin'ny famokarana vokatra.
Attribution 1: Famaritana ny vokatra
Ny mari-pahaizana izay manavaka ny vokatra ao anatin'ny sehatry ny famatsiana dia angamba, ny toetra mampiavaka indrindra amin'ny famaritana ny mety ho fiantraikan'izany amina rindran-tsakafo izany.
Any amin'ny faran'ny fifandimbiasana samihafa dia ny entana, izay tsy misy fahasamihafana. Ireo dia vokatra avo lenta voangona avy amin'ny loharanom-baovao marobe, ary iombonan'ny singa tsirairay avy - na trondro iray manontolo na filet na vokatra miampy sanda - dia heverina ho mitovy, na aiza na aiza, aiza, oviana, na iza no novokarina na voajinja. Ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana dia ny vidiny no voalohany, ary avy eo ny fanapahan-kevitra momba ny kalitao, tsy misy fiheverana firy momba ny faharetana (na dia misy fanamarihana etsy ambany aza). Ny rojom-pamokarana izay mitana ny vokatra entina mazàna dia mamindra ny vokatra voahodina izay afaka mivaingana sy misonoka ary mihamangatsiaka imbetsaka rehefa mandehandeha amin'ireo mpilalao marobe miasa amin'ny firenena marobe erak'izao tontolo izao. Mihabetsaka hatrany, ny dingana iray ao anatin'ireto rojom-bolo ireto dia misy ny fivezivezena mamaky an'i Chine, izay matetika misy ny fanodinana (ohatra: famenoana, famokarana) alohan'ny hamoahana vokatra indray.
Ny rojom-barotra dia tsy voatery manara-maso ny vaovao momba ny fiavian-tsarimihetsika, ary tsy mahafantatra ny fisian'ny tambajotra ahafahana manara-maso ny fitantanana maharitra na fomba fanao. Fa kosa, ny vokatra azo avy amina varotra mamidy ho an'ny entam-barotra dia entina miaraka amin'ny vokatra tsy azo antoka. Maro ny mpanjono avo lenta no mamatsy ireo rojom-panaterana entana, fa ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra dia ahitana salmon, cod (sy karazam-borona hafa), tononkalo, anchovies, ary crab.
Amin'ny fampiroboroboana fandaharanasam-pitiliana maharitra momba ny fikarakarana maritiora, anefa, ny vokatra fanodinana karazan-tsakafo ankehitriny dia misy singa iray mampiavaka azy. Toy izany ny vokatra azo avy amin'ny MSC-certified trondro antsoina hoe McDonald. Ny habetsaky ny avo sy ny fifanakalozan-drivotra, manome sehatra ny vokatra ireo rojo famatsiana ireo mba hahafahana mamantatra izany ho an'ireo mpanjono manana mari-pahaizana manokana.
Any amin'ny faran'ny endriky ny vokatra dia misy vokatra samihafa, izay miavaka amin'ny hafa mifototra amin'ny fampahalalana manokana, anisan'izany ny fijinjana toerana, ny fomba fanjonoana, ny mpanjono na ny fikambanan'ny mpanjono, ny mari-pamantarana mari-pototra, ary ny marika. Amin'ny ankapobeny, ny fanapahan-kevitr'ireo mpilatsaka an-tsokosoko dia alefa amin'ny alàlan'ny kalitao sy ny vidiny, na, farafaharatsiny, amin'ny lafiny roa, raha tsy mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra mazava ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny vokatra entana.
Amin'ny alalan'ny famatsiana gadra dia misy dingana maro samihafa izay mifototra amin'ny:
Jeografika: fanangonana ny vokatra rehetra avy amin'ny fanaka marobe amin'ny jono iray;
Ny vokatr'ireo vokatra: vokatra manokana (mifototra amin'ny habe, ny kalitao, ny faharetana) avy amin'ny sambo amin'ny fisian'ny angona na tsy misy angon-drakitra;
Basy: antonta vokarin'ny vokatra, toy ny avy any amin'ny tany tsy fantatra, ny haingam-pandeha, na ny fandrika;
Trondro iray: karazana avo lanjany izay mety ho marihina miaraka amin'ny fitsipika tsy manam-paharoa, anisan'izany ny tononkalo, lobster, salmon, ary snapper.
Ny rojo famatsian-tsarimihetsika izay miandraikitra ny vokatra samihafa dia mila manara-maso ny fitantanana ny angona angon-drakitra sy ny rafitra fitiliana mba handinihana sy hanamarinana ny fampahalalana mifandraika amin'ny singa fiavahana. Ny varotra famarotana varotra samihafa dia afaka mivarotra tsena eo an-toerana, eo amin'ny faritra, na fanondranana. Amin'ny ankapobeny, ny latsaky ny dingana misy eo anelanelan'ny fijinjana sy ny vokatra farany amin'ny endriky ny vokatra ary ny marika, dia mora kokoa ny mitazona ilay tantara miaraka amin'ny trondro.
Ny tonelina Yellowfin dia entina eo amin'ny dockside ary entina mankany amin'ny toeram-pambolena iray ho an'ny fanodinana sy fanondranana, Indonezia. Sary © Jeremy Rude / TNC
Tsy misy fitsipika napetraka momba ny hoe mendrika ve ny vokatra ho avahana na entam-barotra. Ohatra, ny sambo iray dia mety hamoaka hazandrano tokana misy trondro tsirairay miaraka amin'ny endriny samihafa. Mifanohitra amin'ny fandefasana ny antsapaka manontolo ho fantsom-barotra, ny mpampivelona na ny mpanodin-draharaha dia mety manasokajy ny vokatra arakaraka ny habeny, ny kalitaony, na ny toetrany hafa izay ilain'ny tsena handoa premium. Noho izany, ny hazandrano mihitsy dia miavaka miavaka, ary avy eo ny vokatra tsirairay dia mety hiafara amin'ny entam-barotra na vokatra miavaka, arakaraka ny fangatahan'ny tsena manavaka vaovao. Mety ho lasa sarotra kokoa aza ny fizotrany rehefa mandeha amin'ny alàlan'ny rojom-panomezana marobe ny vokatra avy amin'ny fangatahan'ny mpividy. Amin'ny jono amoron-dranomasina, ohatra, ny vokatra voamarina MSC dia mety miakatra toy ny entana tsara indrindra amin'ny magazay fivarotana enta-mavesatra, na azo amidy ho entam-barotra amin'ny alàlan'ny rojo izay manome vokatra any amin'ny trano fisakafoanana misy rojo. Amin'ity tranga farany ity, ny vokatra iray hafa dia nanjary lasa rojom-barotra, izay very ny endri-javatra manavaka avy eo.
Attribution 2: Marika Manatrika
Ny famenoana sasany sasany dia tarihan'ireo marika izay mamaritra ny fepetra momba ny vokatra sy ireo protocoles hafa izay tsy maintsy arahin'ny mpamokatra, ny processeur, ny mpivarotra ary ny mpanjifa farany. Ity marika manan-kery ity dia mety hisy fiantraikany amin'ny rojom-panaterana eo an-toerana, amin'ny faritra, na amin'ny firenena na iraisam-pirenena Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fiantraikany dia manjavozavo, avy amin'ny mpividy farany iray (ohatra: Whole Foods), mpampiasa vidin-javatra (ohatra: Wild Planet), broker (ohatra, CleanFish), na sertification certification standard ( ohatra, MSC). Amin'ny toe-javatra hafa, ny marika iray noforonina na miaraka amin'ny mpanjono dia hamorona lozam-pifamoivoizana eo amin'ny sehatry ny famatsiana, araka ny hita amin'ny orinasa mpamadika traikefa (oh: ThisFish), fikambanana tsy miankina (Gulf Wild), na koa kooperativa fisaka (ohatra , Gold Alaska). Ireo fepetra takian'ny marika dia mety mifototra amin'ny toerana, ny kalitao, ny fepetra maharitra, na ny toetra hafa izay manavaka ny marika eny an-tsena. Noho izany dia mametraka rafitra ahafahana manamarina fa ny vokatra voamarika dia miavaka amin'ny vokatra tsy misy rantsana (izany hoe misy mpilalao midina midina an-tsokosoko mety ho tafiditra amin'ny fanodinana sy fizarana karazana marika marika sy tsy voavaha). Tsy mahazatra ny marika hijerena ireo mpilatsaka an-tsokosoko midadasika izay afaka manolotra andraikitra maro (toy ny processeur / distributor), ary amin'ny tranga sasany dia hividy trondro mivantana avy amin'ny mpamokatra ny marika ary hanatanteraka ny fanodinana sy ny fampiroboroboana ny tenany mba hihazonana azy fanaraha-maso akaiky sy fiarovana bebe kokoa amin'ny marika. Ny mpilalao tsirairay avy ao amin'ny varotra dia manana fifandraisana mivantana na indraindray miaraka amin'ny marika ary indraindray ny marika dia singa manokana amin'ny tsenan'ny vokatra avy amin'ny mpamokatra. Raha miankina amin'ny iraka ambadiky ny marika sy ny fahafahana miditra amin'ny mpandray fanapahan-kevitra lehibe, dia azo atao ny mametraka ny rojom-panatanjahantena iray manontolo amin'ny fiasan'ny marika iray mba hampidirana ireo fepetra maharitra amin'ny endriny manokana.
Attribution 3: Relationship Dynamics
Ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny seafood dia matetika dia maharitra sy mitoky amin'ny fahatokisana, indrindra ny fifandraisana eo amin'ny mpanjono sy ny mpividy azy (ohatra, ny mpanelanelana, ny mpandray voalohany). Ao anatin'ireo jono manerantany sasany, ireo fifandraisana ireo dia mitovy amin'ny raharaham-barotra sy ny an'ny tena manokana. Ohatra, ny mpanelanelana iray izay mividy mpanjono dia mety hanome vola fisotroan-dronono sy ranomandry, ary mety hanangom-bola mihitsy aza. Matetika, ny mpanelanelana dia mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjono. Ary raha toa ny mpanarato sasany mety hahatsapa fifandraisana amin'io karazana fiankinan-doha io na mety ho vintana amin'ny fananana mpividy fiantrana, ny hafa dia mety ho voafandrika. Na dia eo aza ny varotra fanampiana, dia mety ho mora foana ny fifandraisana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy, indrindra raha manomboka manararaotra ny toerana marefo ny mpivarotra (mihazona ny fanariam-pako) na ny fidirana amin'ny alàlan'ny varotra (jereo ny Attribution 5: Bottleneck). Na izany aza, raha toa ka mahasalama ny fifandraisana eo amin'ny varotra ny varotra, ary mety ho samihafa ny vokatra, ny famatsiana gadra misy fifandraisana toy izany dia mety ho anisan'ny fomba azo itokisana indrindra sy mety hanatsarana ny fanovana izay mety hahasoa ny maharitra maharitra fisotroana-na ny resaka momba ny loharanon-karena sy ny vahoaka ary ny orinasa voakasik'izany. Amin'ny toe-javatra misy ny fifandraisana ara-barotra amin'ny fifandraisan-tserasera dia somary sarotra ny mitarika mivantana.
Attribution 4: Consolidation (Vondrona mifamatotra amin'ny fanivanana)
Betsaka ny famatsian-tsakafo amin'ny seafooda maro no miditra amin'ny sehatra. Ny singa rehetra momba ny fitaovam-pitaovana dia miankina amin'ny tompona orinasa tokana, miaraka amin'ny mpilalao iray iray manara-maso ny dingana lehibe indrindra amin'ny sehatry ny famatsiana, avy amin'ny hetsika fanjonoana mandra-pivarotana ny vokatra hatramin'ny farany ny mpividy, na ny mpanjifa. Raha ilaina, dia azo ampiasaina amin'ny mpanjono tsy miankina ihany koa ny vokatra fanampiny. Ny fidirana avoakan'ny avo dia manome orinasa manana fidirana azo antoka amin'ny vokatra ateraky ny sambony, miaro ny orinasa avy amin'ny saran-danjam-bidy, ary mamela ny kalitao akaiky sy ny fanaraha-maso. Vondron'orinasa goavambe no mampiseho io endri-javatra io amin'ny ankapobeny, mamindra vokatra vaovao sy mangatsiaka eran-tany, na dia misy aza ny fanamafisana dia mety ho hita amin'ny fisarihana ireo orinasa madinika. Ho an'ireo orinasam-pitokisana maharitra, ny fidirana mivantana dia tena manatsara ny fampiharana ny fomba fitantanana tsara kokoa na ny fomba fanaovana jono - ny zavatra rehetra ilaina dia torolàlana ambony indrindra. Ho an'ireo orinasa izay mandrisika fotsiny amin'ny tombombarotra na tsy manaiky ny maha-zava-dehibe ny fitantanana maharitra, ny fidirana mivantana dia afaka mamorona sakana iray hiova.
Amin'ny faran'ny lantom-peo dia misy rojo misy fehezanteny ahafahan'ny asa tsirairay atao avy amin'ny orinasa tsy miankina, ny tsirairay miasa mba hahazoana tombony. Ny rojo famenoana fohy (mpilalao 2-3) na ireo mifantoka amin'ny vokatra samihafa na eo an-toerana dia afaka miasa amim-pahombiazana ary mety ho afaka mandrisika ny tanjona mahazatra sy mifanohitra amin'ny tombontsoa maharitra. Na izany aza, ho an'ny rojo mifantoka amin'ny vokatra entana na ho an'ireo izay maharitra ela (5-10), dia mety ho sarotra kokoa izany fiaraha-miasa izany. Amin'ny ankapobeny, rehefa mihamitombo ny varotra dia mihamitombo ny marika ary ny mpilalao dia manosika hanao izay rehetra ilaina mba hampihenana ny fandaniana (tafiditra amin'izany, indraindray, ny hosoka entina), satria ny mpanjifany (ny mpilalao tsirairay avy) dia mijery foana Mandoa ny vidiny mora indrindra.
Attribution 5: Accessibility Market (Dinika amin'ny Access Access)
Maro ny mpanjono an-jatony, manerantany dia misy mpanjono marobe mivarotra ho an'ny mpanelanelana vitsivitsy izay mihazona ny fifandraisana misy eo aminy. Ireo mpanelanelana dia mamorona tavoahangy ho an'ireo mpanarato, mametra ny fidirana mivantana amin'ny tsena. Raha miankina amin'ny karazana vokatra sy ny toerana misy ny fisian'ny fisamboaravoaran-javatra, dia mety hisy andiana mpanelanelana mpanelanelana izay mitondra vokatra ho an'ny mpivarotra na mpaninjara iray manompo tsena anatiny na iraisam-pirenena; na mety misy mpanelanelana mpanelanelana iray-mpanamboatra mpividy avy any amin'ny mpanjono any an-toerana ary ny vavahadin-tseraseran'ny orinasa vahiny mba hahazoana ny vokatra entana. (Matetika ireo mpandrindra no mitazona fahazoan-dàlana hitrandraka). Ny fisian'ny voka-dratsiny toy izao dia mametra ny fisian'ireo mpanjono angaha tsy maintsy hifampiraharaha amin'ny vidiny. Ny fahaiza-manaon'ny fitondram-pihariana mifandraika amin'ny fitantanana maharitra dia afaka manatsara ny fahefana ataon'ny mpanelanelana, izay mitaky ny mandresy lahatra azy (na izy) fa ny fomba fampiharana maharitra dia mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa. Amin'ny trangan-javatra momba ny Fandrosoana Fishery (FIPs), izany dia matetika atao amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny mpividy ao an-toerana na avy any ivelany izay afaka mampanantena tsaratsara kokoa ny tsena amin'ny tsena na vidiny ho setrin'ny fitantanana tsara kokoa na ny fomba fanjonoana.
Ny mpanarato sasany dia manana safidy bebe kokoa rehefa tonga amin'ny toerana misy azy sy mivarotra ny trondro. Mety ho akaikin'ny tsenan'ny farany izy ireo, miaraka amin'ireo safidy amin'ny fandosirana ny mpanelanelana sy mivarotra mivantana. Na mety manana vokatra be dia be ny entana, miaraka amin'ny mpividy maro mety hividy ny vidiny. Raha toa ka misy fiantraikany eo amin'ny fomba fanjonoana manoloana ny faharetan'ny mpanjono, dia mety ho mora entina ihany ireo mpanjono, indrindra amin'ny mety hisian'ny fantsom-baovao vaovao.
Famintinana ny toetran'ny sehatra fitakiana harena an-dranomasina
Ankoatra ny famaritana ny toetra mampiavaka izay misy ao anaty rojom-panatobiana harena an-dranomasina, ireo toetra ireo koa dia manomboka manasongadina ny mety hitrangan'ny fifandraisana amin'ny mpilatsaka an-tsokosoko, mba hanatsarana ny fitantanana ny fisotroan-draharaha. Ny fahatakarana izay mihazona ny fahefana, izay efa nahatonga ny faharetana hatry ny ela, ary ny fomba mora entina hampidirana hevitra na fomba fanao vaovao ao amin'ny sehatry ny fifampiraharaham-barotra dia ny fiheverana lehibe rehetra rehefa mikaroka ny lalam-barotra mba hamelezana ny rojo famatsiana.
Mianara bebe kokoa momba ny ireo fanamby iombonana amin'ny rojom-panatanjahantena.